Bogagga Waxyoobista Nooca Waxyaabaha Aad U Baahan Doonto Inta Aad Ku Jirto Xirfadda Naqshadeynta Sawirka | Abuurista khadka tooska ah
Aad bay ugu badan tahay dadka soo gala naqshad sawireed waxay dareemayaan in hal-abuurnimadu tahay mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn, xitaa hadiyaddooda ugu caansan waana taas marar badan oo mashruuc ama shaqo ah Waxaad ku dhici kartaa xilli fadhiidnimo ah taas oo aad moodo in fikradaha iyo hal-abuurka aan lagu muujin. Niyad jabku wuxuu noqon karaa mid aad u culus tanina waxay keenaysaa in hal-abuurku aanu midho dhalin.
Daqiiqadahaan dhiirrigelin la'aanta waxaan haysannaa Internet aan ka heli doonno bogag halka awood u helida dhiirigelinta qoraalka. Tani waa waxa aan uga hadli doonno maqaalka maanta.
1 Kuwani waa bogagga dhiirigelinta qoraallada ugu badan!
2 Wargeysyada iyo joornaalada sidoo kale ka hadla qorista
Kuwani waa bogagga dhiirigelinta qoraallada ugu badan!
Bogga koowaad ee aan kugula talineyno adiga ayaa lagu magacaabaa Dhanka woqooyi oo asal ahaan waa a dhiirrigelinta naqshadeynta blog dhammaan dadka xiiseynaya naqshadeynta garaafka si loo abuuro mashaariic cusub iyada oo loo marayo waxyaabo badan oo kala duwan, oo si joogto ah loo daabaco. Shaqadu waa mid casri ah oo casriyeysan sidaa darteed waxaad ku yeelan kartaa aragtiyo kala duwan xulashooyinka qaab qorista.
Nooca wanaagsan waa bog kale oo aad u wanaagsan bogga internet-ka ee dhiiri-gelinta qoraallada ah oo aad ka heli karto shaqooyin kala duwan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah, halkaas oo diiwaangelintu ay lacag la'aan tahay, iyo sidoo kale ka-qaybgal, waad ku darsan kartaa alaabtaada si loo sii wado abuurista dhiirrigelinta naqshadayaasha kale ee garaafyada Boggan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa diiwaangelin la'aan maadaama diiwaangelinta kaliya looga baahan yahay inay kaqeyb qaadato iskaashiga qaabeynta.
Bogga nooca waxay kaloo noqotay tiir dhexaad dhiirrigelinta naqshadeynta garaafka waana asal ahaan boggan waxaa sameeyay oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka, halkaas oo aad ka heli karto tiro badan oo galleeriyo ah oo ka socda degello internet oo kala duwan, faylalka ugu wanaagsan ee shabakadaha ecommerce, naqshadaha ugu fiican ee blog, iyo xitaa naqshadaha websaydhka ugu fiican ee qaabka ugu yar leh.
Haddii aad kaliya rabto inaad gasho bog aad si gaar ah uga hesho qolalka xafladaha sidoo kale waxaad ka qaybqaadan kartaa iskaashiga, markaa waxaan kugula talinaynaa waxaan jecel nahay qoraalka. Haddii aadan raadineynin dhiirigelin shaqo gaar ah, laakiin haddii aad rabto heer sare ka gaadho qoraalka iyo naqshadeynta garaafka, ka dibna bogga nooca agaasimayaasha naadiga waa waxaad raadineysay. Boggan waa urur caalami ah oo doonaya inuu hagaajiyo xirfadda naqshadeeyayaasha garaafka isla markaana ku dhiirrigeliyo inay ku fiicnaadaan oo ay ku fiicnaadaan waxa ay sameynayaan, iyo sidoo kale matoorro tayo wanaagsan leh.
Wargeysyada iyo joornaalada sidoo kale ka hadla qorista
Nooca Aragtida dhanka kale, waa wargeys lagu sameeyay Oklahoma, Mareykanka, halkaasoo fikradaha kala duwan, wararka, wareysiyada iyo dhaleeceynta qoraalka, iyo sidoo kale fikradaha naqshadeynta garaafka cusub la abuuray. Opentype.info waa baloog laga sameeyay Jarmalka, oo ku takhasusay garashada goobta, qaab qorista, calaamadaha, iyo mowduucyo kale oo naqshadeysan.
Wixii qoraallo qoraallo kala duwan ah oo Isbaanish ah, waa Hadiyad Serif, halkaasoo aad ka heli doontid waxyaabo kala duwan oo ku saabsan naqshadeynta garaafka, iyo sidoo kale dhiirrigelinta qoraalka. Boggan dhexdiisa qoraallada waxaa la sameeyaa toddobaadle ama labadii toddobaadba mar, si ka duwan inta badan kuwa aan ku sharaxnay inay maalin walba sameeyaan.
Qaar ka mid ah ragga adag Waxay u ekaan kartaa magaca filim cusub oo ficil ah, laakiin maahan, maadaama ay tahay degel uu naqshadeeye kasta geli karo wax badan ka baro naqshadeynta garaafka iyo kan ugu fiican, oo ku saabsan qoraalka. Waxyaabaha xiisaha leh ee arrintan ku saabsan ayaa ah in boggan lagu daabaco qoraalladiisa Isbaanish, si ka duwan inta badan bogagga websaydhka ee ku daabaca waxyaabaha ay ka kooban yihiin Ingiriisiga maadaama Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykankuba ay yihiin labada waddan ee ugu horumarsan xagga suuq-geynta iyo naqshadeynta garaafka.
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talin doonnaa akoon Trumblr la yiraahdo farta aan jeclahay, meeshaad karto wadaag farta loo isticmaalo xirfad ahaan, laakiin taasi waxay ka kooban tahay ruqsad, gebi ahaanba bilaash, sidoo kale isticmaal noocyada kala duwan ee ku jira sharci ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Bogagga Waxyoobista Nooca Waxaad U Baahan Doontaa Intaad Ku Jirto Xirfadda Naqshadeynta Sawirka
Qaab-qoriddani waxay muhiim u tahay sidii loo abuuri lahaa astaan ​​astaan ​​u ah. Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay haddii aad leedahay astaanta oo aysan ku habboonayn font, way baabi'in kartaa mashruuca. Tusaale ahaan, haddii astaanta teknolojiyad loo qaabeeyey, qaab-qorista waa inay raacdaa xariiqdan, dabcan iyada oo aan la dayacin midabka la qabsashada.
Faahfaahintaan oo dhan waa in la tixgeliyaa ka hor inta aan la bilaabin mashruuc, waxaanan kugula talinayaa in horumarka la gaarsiiyo kahor maalinta ugu dambeysa ee la keenayo, tan si loo dhammeeyo shaqada waqtigeeda iyadoo aan lagu degdegin oo kaliya loogu talagalay macmiilka.
Waan u xiisay xiriiriyeyaasha bogagga, badankood way fududahay in la helo laakiin kan ugu horreeya, oo woqooyiga ka socda, igama muuqdo meelna.
Ku jawaab arturios
Naqshadeynta sawirada ayaa mas'uul ka ah walxaha cajiibka ah ee filimada